Schorl - ụdị anụ ọhịa na-emekarị nke na - eme njem nlegharị - redium ígwè - video
Zụrụ oji ojii na-ahụ maka okike n’ahịa anyị
Ụdị njegharị tourmaline kachasị dị na ya bụ schorl, ihe dị na sodium nke ìgwè ahụ. Ọ nwere ike ịdekọ maka 95% ma ọ bụ karịa nke tourmaline niile na ọdịdị. Akụkọ ihe mere eme nke mbụ nke scrall minerals na-egosi na a na-eji aha ahụ bụ "schorl" eme ihe tupu 1400 n'ihi na obodo a maara taa dị ka Zschorlau dị na Saxony, Germany bụzi "Schorl" ma ọ bụ obere mgbanwe dị iche iche nke aha a, obodo ahụ dịkwa nso tin m ebe, na mgbakwunye na cassiterite, a chọtara oji tourmaline. Nkọwa mbụ nke schorl na aha "schürl" na ihe omume ya, ihe dị iche iche mines dị na Saxony Ore Mountains, dere Johannes Mathesius (1504-1565) na 1562 n'okpuru isiokwu bụ "Sarepta oder Bergpostill". N'ihe ruru 1600, aha ndị ọzọ e ji mee ihe n'asụsụ German bụ "Schurel", "Schörle", na "Schurl". Malite na narị afọ 18, a na-akpọ aha Schörl karịsịa na mpaghara German. N'asụsụ Bekee, a na-eji aha chorl na shirl mee ihe na 18th century. Na narị afọ 19th, aha ndị na-agụkarị, schörl, schorl na ígwè tourmaline bụ okwu Bekee eji mee maka ịnweta ihe a.
Tourmaline bụ mineral silicate crystalline. Ụfọdụ ihe ndị na-achọpụta bụ aluminum, ígwè, nakwa magnesium, sodium, lithium, ma ọ bụ potassium. Nhazi ahụ bụ nkume dị oké ọnụ ahịa dị oké ọnụ ahịa. ọ na-abịa n'ụdị dịgasị iche iche.
Dị ka Madras Tamil Lexicon si kwuo, aha ahụ sitere na Sinhalese okwu "thoramalli", otu ìgwè nkume ndị dị na Sri Lanka. Dịka otu akwụkwọ ahụ si kwuo, Tamil "tuvara-malli" sitere na Sinhalese okwu mgbọrọgwụ. Nke a na-esite na akwụkwọ ọkọwa okwu ndị ọzọ gụnyere Oxford English Dictionary.
N'ihe dị iche iche na-eme njem na tourmaline, karịsịa pink na-acha uhie uhie, ọgwụgwọ okpomọkụ pụrụ ime ka agba ha dịkwuo mma. Nlekọta ọkụ na-ekpo ọkụ nwere ike ime ka agba aja uhie gbaa. Ịdọrọ ikuku na ụzarị ọkụ ma ọ bụ eletrọn nwere ike ime ka agba aja aja na-acha na-acha ọcha. Irradiation bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke a na-adịghị ahụkebe na tourmalines, ọ bụghị, ugbu a, na-emetụta uru ahụ. Anyị nwere ike melite àgwà ụfọdụ na-eme njem nlegharị anya, dị ka kọlọtọ na paradaba Brazil, karịsịa ma ọ bụrụ na nkume ndị ahụ nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Site na akwụkwọ nyocha. A tourmaline nke meworo ọgwụgwọ na-egbuke egbuke, karịsịa paraiba dịgasị iche iche, ga-aba uru dị ala karịa nkume nkịtị.
Schorl si Mogok, Myanmar